Dadweynaha ku nool magaalada garowe oo soo dhoweeyey barxada cusub ee garowe. | Sahan radio
Dadweynaha ku nool magaalada garowe oo soo dhoweeyey barxada cusub ee garowe.
Dadwaynaha kunool Magaala Madaxda Puntland ee Garoowe ayaa soo dhaweeyey horu marka Balaaran ee ka socda caasimada Dawlada Puntland Garoowe.
Qaar kamid,ah Dadwaynah oo uu waramay radio sahan ayaa sheegay inay soo dhawaynayaan Barxada Cusub iyo Dhamaanba Horumarka Caasumada Puntland.
Samatar sooyaan oo kamid,ah dadka wax qora ee kunool magaalada garoowe ayaa sheegay in arintani ay thaay mid laga maarmaan,ah,laakiin loo baahanyahay in caalamadaha baabuurta kala haga loo sameeyo,si aysan shil uga dhalan.
Docda kale waxa uu walaac ka muujiyey tarafiga isagoo sheegay in taraafiga dhibaato ku hayaan bulshada loona baahan inay bulshadu bartaan taraafiga,waxa uu intaas kudaray in wadayaasha qaar kood aysan aqoon ulahay .
Dhawaan ayey ahayd Markii Madaxwaynaha Dawlada Puntland Pro :C.wali Mahamed Cali Gaas uu xariga ka jaray Laba wado oo Mari doona xaafadaha magaalada garoowe,sidoo kale waxa uu xariga ka jaray barxadan cusub.